Mendri-pitokisana ve ny Fivavahana eo Amin’ny Resaka Vola?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ngabere Norvezianina Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Fivavahana sy ny Resaka Vola
Nazoto niangona i Lafatra, * izay manan-janaka fito. Hoy izy: “Nilazako ny pasiteranay fa te hianatra Baiboly aho.” Tsy nampianatra azy mihitsy anefa ilay pasitera, ka tsy niangona intsony izy. Hoy i Lafatra: “Nanoratra ny mpitantam-bola tao am-piangonana hoe: ‘Vola fotsiny alefa rehefa tsy afaka miangona ianao.’ Hoy aho anakampo: ‘Tsy raharahainy akory aho na miangona na tsia, fa ny volako fotsiny no tangosany.’ ”
Hoy i Finaritra, vehivavy tia fivavahana: “Intelo mandalo ny fitantazan-drakitra mandritra ny fotoam-pivavahana, ary mila mandrotsaka foana ianao. Mangata-bola foana no ataony. Hitako hoe tsy manana ny fanahin’Andriamanitra mihitsy ry zareo.”
Mitady fomba maro hanerena ny olona hanome vola ve ny fivavahana eny aminareo? Mifanaraka amin’ny Baiboly ve izany?
Hoy i Jesosy, ilay nanorina ny Fivavahana Kristianina: “Efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka manomeza maimaim-poana.” (Matio 10:8) Tsy tokony hovidim-bola àry ny hafatra raketin’ny Baiboly, fa tokony hahazo daholo izay rehetra mitady.
Ahoana no nisahanana ny fandanian’ny fiangonana, tamin’ny taonjato voalohany?
Nanao fanomezana an-tsitrapo “araka izay fanapahan-keviny tao am-pony” ny tsirairay. ‘Tsy tamin’alahelo na an-tery’ anefa, satria “ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra.” (2 Korintianina 9:7) Hoy ny apostoly Paoly: “Rehefa nitory ny vaovao tsara ... izahay, dia niasa andro aman’alina mba tsy hampitondra enta-mavesatra na iza na iza taminareo teo amin’ny lafiny ara-bola.” (1 Tesalonianina 2:9) Nanao lay i Paoly mba hahazoany vola hanatontosany ny fanompoany.—Asan’ny Apostoly 18:2, 3.
Mivory amin’ny trano tsotsotra atao hoe Efitrano Fanjakana ny maro aminy. Ahoana no isahanany ny fandaniana? Tsy mitanty rakitra ry zareo, sady tsy mandefa valopy hitakiana vola. Raha misy mankasitraka an’ireo fandaharana ara-panahy, dia afaka mandrotsaka vola mangingina ao amin’ny boaty ho an’ny fanomezana an-tsitrapo izy.
Ahoana no tokony hahazoan’ny fiangonana vola?
Marina fa vola be no anaovana pirinty sy itaterana gazety toy ity. Tsy misy dokam-barotra na fomba hafa itadiavam-bola anefa ao amin’izy ireny. Izay hanelezana ny fahamarinana ara-baiboly no tena imasoana.
Ahoana ny hevitrao? Mifanaraka amin’ny tenin’i Jesosy sy ny ohatra nomen’ny Kristianina fahiny ve izany fomba isahanana ny fandaniana izany?
^ feh. 2 Nisy novana ny anarana ato amin’ity andian-dahatsoratra ity.